Archive du 07-mars-2022
Ny mpanao facebook migadra Ny afera amina miliara vitavita ho azy
Henjana ny fanenjehana sy fampiantsoana noho ny famoaham-baovao amin’ny tambazotran-tserasera tato ho ato ataon’ity Fanjakana Rajoelina ity.
Naha valalanina ny mpanara-baovao sy ireo mpamakafaka moa ny fihetsikana solombavambahoaka iray nanoloanana mpampianatra teny amin’ny lisea, ny volana febroary lasa iny.
Difotry ny fahantrana ny Malagasy 10 000 Ar isan’andro no vola henjehin’ny ankizy mpangataka
Tena difotry ny fahasahiranana ny Malagasy. Lasa mandray anjara amin’ny famelomana ny tenany hatramin’ny ankizy ankehitriny noho ny hasarotan’ny fiainana.
Lalan-dratsy eto Antananarivo Miteraka fatiantoka ho an’ireo taxi be
Samy misedra olana avokoa ireo fiara fitateram-bahoaka rehetra eto an-drenivohitra na ny fiara karetsaka na ny taksibe vokatry ny lalana maro simba.
Marc Ravalomanana Mbola ho kandida ihany ve ?
Vao migadona ny taona 2023, dia efa taom-pifidianana. Mbola baraingo amin’ny rehetra ny sarisary ara-politika mety hipoitra ao anatin’izay.
Vovonana « miaraka.com » Mpandraharaha maherin’ny 2000 no voafitaka
Maherin’ny 2000 isa ireo mpandraharaha Malagasy lasibatry ny vovonana namitaka azy ireo iray antsoina hoe miaraka.com, raha ny fanazavan’ny mpitondra tenin’ireo resy lahatra ny hametraka fitoriana manoloana ny toe-draharaha,
Fahasalamana Mahafaty ny fanintona saingy azo tsaboina tsara
Ny zaza fito volana eo no matetika no tratrin’ny aretina faninontona raha nambaran’ny mpitsabo . Fiakaran’ny maripana ambony no mahatonga ny zaza iray hifanintona izay tafakatra hatramin’ny 39̊C.
Fanokafana ny sisin-tany Amin’i La Réunion ihany angaha ?
Ny sabotsy 05 martsa teo, fotoana voatoandro fa nisokafan’ny sisin-tany tamin’ny fomba ofisialy araka ny didim-panjakana noraisina tao amin’ny filankevitry ny minisitra ny 23 febroary vao nitondra fanazavana ny Fanjakana momba ireo pitsopitsony,
Jean Marc Koumba Miomana hanangana ny akademian’ny haiady
Miomana hanangana ny akademian’ny haiady na « Académie des Arts Martiaux » eto Madagasikara amin’izao fotoana izao ilay mpikatroka Kick Boxing,
Toetry ny andro Miala any indray ny rivodoza
Efa nandrivotra be ny teto Antananarivo nanomboka omaly hariva. Miha manakaiky hatrany an’i Madagasikara ilay andro ratsy miforona any amin’ny ranomasimbe Indianina.
Olan’ny tosi-dra Ny 70%-n’ny Malagasy no
Anisan’ny olana ara-pahasalamana iray tena mamely ny Malagasy ny tosi-dra amin’izao. Raha araka ny fanadihadiana natao mantsy dia ny 70%-n’ny Malagasy
Ambohimahasoa Zaza 5 taona, hita faty tao ambany tetezana
Tsy mitsahatra mamono olona ny rano eto amintsika. Vao niandoha ity volana martsa ity dia zaza mianadahy no lasan’ny rano rehefa avy nirava nianatra ary namono ny ainy avokoa.
Lonilony sy ady an-trano Tandindonin-doza ny baolina kitra Malagasy
Hanao lalao fitsapana amin’ny Eperviers Ekipam-pirenen’i Togo ny Barean’i Madagasikara ny 26 martsa izao, hatao any Maraoka, ho fanomanana ny fifanintsanan’ny CAN 2023.
Rano manodidina ny QMM Miakatra ny tahana uranium sy plomb
Mampanahy fatratra ny famatsiana rano fisotro ho an’ireo mponina manodidina ny orinasam-pitrandrahana QMM, raha ny fampanenoana lakolosy nataon’ireo fiarahamonim-pirenena nanadihady momba azy io toy ny CRAAD-OI, FARM, Payez Ce Que Vous Payez Madagascar, OSC-IE, SIF, Collectif TANY.
Sambo feno vary 19 andro tsy tafiditra an-tseranana 200 tapitrisa ariary isan’andro eo ny hofany fanampiny
Tafiditra soamantsara tao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina androany 5 martsa 2022 rehefa nihantsona teo amoron-tsiraka (en rade) nanomboka ny 15 febroary lasa teo noho ny andro ratsy sy ny filaharana amin’ny fidiran’ireo
Faritra Ihorombe Nihena ny tahan’ireo olona voan’ny tazomoka
Anisan’ny aretina iray mbola miteraka fahafatesana be indrindra eto amintsika ny aretina tazomoka.
Antoko politika Natiora Handefa taratasy misokatra ho an’ny sehatra iraisam-pirenena
Handefa taratasy misokatra ho an’ny sehatra iraisam-pirenena amin’ity anio ity, raha tsy misy ny fiovana, ny antoko politika Natiora, tarihin’ny filoha nasionaliny, Mihari-Ni-Rencho.
Eliace Ralaiarimanana “Voaoman’Andriamanitra hanavotra firenena aho”
Miarahaba antsika vahoaka Malagasy rehetra ny tenako, tiako ny manambara sy mitondra porofo amintsika anio fa firenena efa nomanin'Andriamanitra hahaleotena ity firenentsika ity fa ny mpitondra no minia mikipy tsy mahalala
Jeneraly Lylison – Filohan’ny FMKB ‘’Tsy ataontsika ho sakana ny vola”
Lany ho Filohan’ny Federasionina Malagasy ho an’ny taranja Kick-Boxing (FMKB) ny Jeneraly Lylison de Roland, izay loholona am-perin’asa mitondra lokon’ny TGV-MAPAR amin’ny anaran’ny Faritra Sofia.
Mananjary Marobe ireo olona tsy afaka mitsabo tena
Sahirana mafy ny ankamaroan’ireo mponina any amin’ny distrikan’i Mananjary indrindra taorian’ny nandalovan’ny rivo-doza Batsirai sy Emnati tany an-toerana ka nampihanakabe ny fahantrana.